निशान किक्स किन्ने ग्राहकलाई उत्कृष्ट अफर दिँदैछौँः ज्ञानेन्द्र चन्दको अन्तर्वार्ता
1:01 pm, आइतबार, फाल्गुन ५, २०७५
विगत ५ वर्षदेखि नेपाली बजारमा डाट्सन र विगत २ वर्षदेखि निशानका उत्पादन बिक्री–वितरण गर्दैआएको सारडा ग्रुपअन्तर्गतको पायोनियर मोटाे कर्पले भारतीय बजारमा आएका डाट्सन र तेस्रो मुलुकबाट समेत ल्याएर निशानको उत्पादनलाई नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गर्दैआएको छ ।
निशानको डिलरसीप लिएपछि टेरानो एसयूभीलाई नेपाली बजारमा ल्याएको कम्पनीले अर्को नयाँ एसयूभी किक्स नेपाली बजारमा आजबाट बिक्री–वितरण सुरु गर्दैछ । निशान र डाट्सनको बिक्री, सर्भिस र अन्य विषयमा आधारित रहेर कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र चन्दसँग मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
निशानको डिलरसीप लिनुभएको कति भयो ? व्यापार कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
पायोनियर मोटाे कर्पले निशानको डिलर लिएको दुई वर्ष हुँदैछ । २०१७ को सेप्टेम्बरबाट हामीले निशानको गाडी बिक्री सुरु गरेका हौँ । नेपालमा निशानको ब्रान्ड इमेज निकै राम्रो रहेको छ । यो ब्रान्डप्रति ग्राहकको विश्वास निकै राम्रो रहेको पाएका छौँ । हामीले त्यसलाई बिक्रीमा बदल्ने प्रयासमात्र गरेका हौँ । हामी ग्राहकलाई उत्कृष्ट गाडी राम्रो मूल्यमा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यही रणनीतिअनुसार हामीले निशान लिएपछि गाडीको मूल्यसमेत घटायौँ ।
‘भ्यालू फर मनी’को साथमा उत्कृष्ट ब्रान्डको प्रोडक्ट र सर्भिस दिन हामी लागि परिरहेका छौँ । बजारले हामीलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिएको पाएका छौँ ।
अहिले तपाईंहरूसँग कस्ता–कस्ता गाडी रहेका छन् ?
अहिले दुबै ब्रान्ड मिलाएर हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग जति प्रोडक्ट रेन्ज अन्य कम्पनीसँग छैन । हामीसँग नेपाली बजारमा पाइने सस्तो कारदेखि महंगा गाडीसम्म रहेका छन् । निशान कम्पनीसँग आफ्नै पुरानो इतिहास रहेको छ । नेपालमा समेत करिब ३५ वर्षको अनुभव र ग्राहकको विश्वास निशान कम्पनीप्रति रहेको छ ।
मुख्यतः बजार विस्तारमा नेटवर्कको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । अहिले हामीसँग १६ वटा डिलर नेटवर्क रहेको छ ।
१९३३ बाट निशानका गाडी संसारभर गुड्न सुरु गरेका हुन् । यति लामो इतिहास बोकेको विश्वसनीय ब्रान्डका कारण निशानका गाडी विश्वभर निकै चर्चित रहेका छन् । हामीले निशानको डिलरसीप लिएपछि नयाँ उत्पादनलाई नेपाली बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सन् २०१३ मा भारतीय बजारमा आए पनि नेपाली बजारमा आउन नसकेको टेरानो एसयूभीलाई हामीले नेपाली बजारमा ल्यायौँ । साथै, अहिले करिब २५ दिनअघिमात्रै भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको किक्सलाई आजैबाट नेपाली बजारमा ल्याउँदैछौँ ।
दुई वर्षअघि निशानको डिलरसीप लिएसँगै पुराना नेटवर्कलाई कसरी मिलाएर अगाडि जानुभयो ?
हामीसँग डाट्सनको आफ्नै नेटवर्क थियो । पुराना डिलरहरूसँग सम्भव भएसम्म हामीले मिलेर काम गर्यौ । केही स्थानका डिलरलाई हामीसँग काम गर्ने वातावरण बन्यो भने केहीलाई बनेन । बिर्तामोड, बुटवलजस्ता स्थानका डिलरले हामीसँग काम गर्नुभयो ।
मुख्यतः बजार विस्तारमा नेटवर्कको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । अहिले हामीसँग १६ वटा डिलर नेटवर्क रहेको छ । ५ वर्षअघि डाट्सनलाई नेपाली बजरमा ल्याएसँगै डिलर नेटवर्क विस्तारमा हाम्रो जोड रह्यो । पछि निशान आएसँगै पोखरा र बुटवलबाहेक अन्य स्थानमा संयुक्त नेटवर्क विस्तार गर्दै लगेका छौँ ।
एउटै माउ कम्पनीको दुई प्रोडक्ट बिक्री–वितरण गर्दै आउनुभएको छ, यसले तपाईंहरूलाई बजारको माग र आवश्यकता पत्ता लगाउन सजिलो भएको होला ? कस्तो पाउनुभएको छ, ग्राहकको प्रतिक्रिया ?
संसारभर यी दुई ब्रान्डलाई प्रिमियम र इकोनोमिक ब्रान्डको नामले चिनिने गरेको छ । इकोनोमिक र प्रिमियम ब्रान्डका ग्राहक फरक–फरक हुन्छन् । डाट्सन निशानभन्दा पुरानो कम्पनी हो । सन् १९११ मा स्थापना भएको डाट्सनपछि निशानसँग मर्ज भएको थियो ।
सन् २०१२ मा कम्पनीले उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशको लागि भन्दै बजेट कार निर्माण सुरु गर्यो । जसलाई पुनः डाट्सन नामबाट बजारमा ल्याइयो । विगत ५ वर्षदेखि हामीले पनि नेपाली बजारमा डाट्सनको उत्पादन बिक्री गर्दैआएका छौँ । त्यसैले जुन प्रोडक्ट खरिद गर्ने ग्राहक आउनुहुन्छ, त्यहीअनुसारको प्रोडक्ट रेन्ज हामीले दिनसक्ने अवस्था रहेको छ ।
हिजो निकै सस्तो कार बनाउने डाट्सनले अब त्योभन्दा अगाडि बढेर बजारमा उत्पादन ल्याउन सुरु गरेको छ । कम्पनीले ल्याउन सुरु गरेको फेसलिफ्ट मोडलहरू पहिलेभन्दा फिचर प्याक, सुरक्षित र स्टाइलिस रहेका छन् । कम्पनीले सन् २०२२ पछि डाट्सनलाई पनि प्रिमियम ब्रान्ड बनाउने गरी काम गरिरहेको छ ।
१६ वटा डिलर नेटवर्क बनाई सक्नुभएको छ, सबै स्थानबाट थ्री–एस सेवा दिइरहनु भएको छ ?
प्रायः सबै स्थानबाट हामीले सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पाट्सकाे सुविधा दिइरहेका छौँ । काठमाडौंमा अहिले ५ स्थानमा सेल्स शोरुम रहेको छ भने तीबाहेक अन्य आउटलेट उपत्यकाबाहिर रहेको छ । उपत्यकामा सर्भिसका लागि खुमालटारमा करिब ९ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालकै ठूलोमध्येको एक सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेका छौँ । हाम्रो जति गाडी अहिले बजारमा गुडिरहेका छन् । त्यसको तुलनामा हाम्रो सर्भिस सेन्टर निकै ठूलो रहेको छ । उक्त सर्भिस सेन्टरबाट दैनिक ५० वटा गाडीलाई सहजै सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
पछिल्लो दिनमा नयाँ गाडी खरिदको एक्स्पेरियन्स भन्दै निकै स्टाइलिस शोरुम बढाउने दौड सुरु भएको छ । तपाईंहरू पनि दुईवटा शोरुम एकैपटक बढाउँदै हुनुहुन्छ । ती शोरुम कस्ता हुनेछन् ?
गाडीको बिक्री भनेकै संसारभर ग्ल्यामर वस्तु बिक्री भन्ने बुझिन्छ । तपाईं विश्वमा हुने अटो मेलालाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो सबैभन्दा बढी ग्ल्यामरस पाउनु हुन्छ । त्यसैले लाखौँ–करोडौँका एउटै वस्तु बिक्री गर्ने बिक्रीकक्ष निर्माणमा कम्पनीहरूले रकम खर्च गर्नु स्वभाविक हो ।
जसरी कम्पनीले ‘द इन्टिलीजेन्स एसयूभी’ भनेको छ, साँच्चै यो इन्टिलीजेन्स रहेको छ । यसको डाइमेन्सन निकै राम्रो रहेको छ ।
त्यसमा पनि कम्पनीको गाइडलाइनअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा हामीले मात्रै यस्तो बनाउने भनेर शोरुम बनाउने होइन । हाम्रो नयाँ शोरुम पनि उत्कृष्ट हुनेछ ।
एसयूभी सेग्मेन्टको बजार विस्तार भइरहेको समयमा तपाईंहरूले आज सार्वजनिक गर्न लाग्नुभएको निशान किक्सले कस्तो व्यापार गर्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
संसारभर नै एसयूभीको बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ । हरेक कम्पनीले एकपछि अर्को उत्पादन एसयूभी ल्याइरहेका छन् । त्यस्तोमा निशान त अझ एसयूभी एक्सपर्ट नै भयो नि । निशानले किक्सलाई मूल्य, ब्रान्ड र प्रिमियमनेशको हिसाबले ‘द इन्टिलीजेन्स एसयूभी’ भनेर बजारमा उतारेको छ । हामीलाई विश्वास छ किक्सले नपाली बजारमा नयाँ उचाई पाउनेछ ।
बजारमा भएका अन्य एसयूभीभन्दा निशान किक्स के कुरामा भिन्न रहेको छ ?
जसरी कम्पनीले ‘द इन्टिलीजेन्स एसयूभी’ भनेको छ, साँच्चै यो इन्टिलीजेन्स रहेको छ । यसको डाइमेन्सन निकै राम्रो रहेको छ । यसको एक्सटेरियर निकै प्रिमियम रहेको छ । ग्राउन्ड क्लियरेन्स, इन्टेरियर, सुरक्षा फिचर उत्कृष्ट रहेको छ । यो एसयूभीलाई हामीले जुन मूल्यमा उपलब्ध गराउँदैछौँ, त्यसले हरेक विषयमा गाडी उत्कृष्ट रहेको देखाउँछ । कम्पनीले यो गाडीलाई तीन डिजेल र २ पेट्रोल भेरियन्टमा बजारमा ल्याएको छ ।
निशानका ग्राहक र सम्भावित ग्राहकलाई भनिदिनुस् न । किन निशानकै गाडी किन्ने ?
निशान किन्ने धेरै कारण छन् । विगत ३५ वर्षदेखि यो ब्रान्डले नेपाली बजारमा राम्रो प्रफर्मेन्स गरिरहेको छ । यसका हजारौँ सन्तुष्ट ग्राहक यहाँ रहेका छन् । अर्को निशान टेक्नोलोजीमा निकै अगाडि छ । संसारभर यसको टेक्नोलोजीले प्रशंसा पाउने गरेको छ । यसमा रहेको सेल्फ डाइनोस्टीक सिस्टमले गाडीधनी आफैँले यसका खराबी थाहा पाउन सक्छन् । मूल्यका हिसाबले पनि हामीले निकै राम्रो मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउँदैआएका छौँ । हाम्रो सर्भिस र बिक्रीपछिको सेवासमेत उत्कृष्ट रहेको छ ।
निशान किक्समा कस्तो अफर गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी ग्राहकलाई उत्कृष्ट अफर दिने कम्पनीमध्येमा पर्छौं । पक्कै पनि हामी निशान किक्समा पनि केही नयाँ र उत्कृष्ट अफर गर्नेछौँ । त्यसको लागि तपाईंहरूले आइतबार (आज) बेलुकासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुस्: निशान किक्सको सुरुवाति मूल्य ४८ लाख, टप भेरियन्टको कति ?